Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Hiovaova lalao lehibe ny fiverenan'i TUI any Jamaika
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Miverina any Jamaika ny TUI
Minisitry ny fizahantany any Jamaika, Hon. Edmund Bartlett, mino ny fikasana hiverina TUI, orinasa fizahan-tany lehibe indrindra manerantany, ho any Jamaika dia ho mpamadika lalao ho an'ny sehatry ny fizahantany mandroso.
TUI dia andrasana hamerina ny sidina mankany amin'ny nosy Jamaika afaka andro vitsivitsy.
Izany dia manala ny fisalasalana nifanehatra tamin'i Jamaika tamin'ny tsenan'i UK, izay iray amin'ireo tsenan'ny loharano lehibe indrindra ho an'ireo mpandeha.
Ny sidina dia hitondra sidina enina isan-kerinandro, manome 1,800 ka hatramin'ny seza 2,000. Tamin'ny taona TUI dia nitondra mpandeha fiaramanidina 2019 tapitrisa manerantany.
Ny fanambarana ny fiverenan'i TUI dia manaraka ny Ny fanapahan-kevitry ny governemanta UK hanaisotra ny mpanolo-tsaina azy manohitra ny dia tsy ilaina rehetra mankany Jamaika.
TUI dia andrasana hamerina ny sidina mankany amin'ny nosy afaka andro vitsivitsy, aorian'ny fampiatoana azy ireo amin'ny volana Aogositra noho ny toro-kevitry ny Governemanta UK amin'ny mponina manohitra ny dia tsy ilaina any amin'ny nosy noho ny fandrahonana COVID-19, izay niteraka olana lehibe fizahan-tany.
Ny minisitra Bartlett dia namariparitra ny fanapaha-kevitry ny TUI hanohy ny sidina mankany Jamaika ho "vaovao miarahaba antsika indostrian'ny fizahantany izay miverina amin'ny fivoahana iraisam-pirenena vokatry ny aretin'ny COVID-19." Hoy izy: "Izany dia nanala ny fisalasalana izay nifanehatra taminay tamin'ny tsenan'i UK, izay iray amin'ireo tsenan'ny loharano lehibe indrindra ho an'ireo mpandeha."
Nanambara ny minisitra Bartlett fa “ny fiverenan'i TUI dia ho mpanakalo lalao satria hiteraka fitsidihan'ny mpitsidika avy any Angletera izay iankinan'ny fananana sy mpiara-miombon'antoka fizahan-tany maro eo an-toerana. Noho izany, ny fiatraikany ara-toekarena dia ho lehibe tsy ho an'ny fizahan-tany ihany fa ny toekarena misimisy ihany koa. "
Nanampy izy fa "ny sidina TUI dia hanomboka indray manomboka amin'ny faran'ny herinandro ho avy izao ka mitondra sidina enina isan-kerinandro ny zotram-piaramanidina ka manome seza 1,800 hatramin'ny 2,000. Izahay dia mijery 10,000 XNUMX alina any amin'ny efitrano fandraisam-bahiny misy fihenam-bidy lehibe ho an'ny toeram-ponenana sy ireo mpamandrika hafa, indrindra ny manintona sy ny fitaterana, izay midika asa ho an'ny mpiasa bebe kokoa ary ny tombontsoa ara-toekarena ho an'ny ankohonany. ”
Hoy ny minisitra Bartlett: “Miaraka amin'ny fandaharam-potoana izao ny TUI, Fizahan-tany any Jamaika Ny fanarenana dia mandeha amin'ny laoniny mba hahazoana indray ny toerana very ary mametraka antsika manakaiky ny fiverenana amin'ny isa firaketana mialoha ny COVID. ”
Tamin'ny taona 2019, TUI dia nitondra mpandeha fiaramanidina 11.8 tapitrisa manerantany. Izy io dia vondrona mpizahatany voalohany eto an-tany. Ny portfolio malalaka niangona teo ambanin'ny elo an'ny vondrona dia misy mpandraharaha mpizahatany matanjaka, masoivoho mpitety faritany manodidina ny 1,600 ary vavahady an-tserasera mitarika, seranam-piaramanidina dimy misy fiaramanidina 150, hotely 400 eo ho eo, eo amin'ny 15 eo ho eo ny sambo fitsangantsanganana ary masoivoho maro tonga any amin'ny toerana fialantsasatra lehibe rehetra manerantany. . Manarona ny rojom-bidin'ny fizahan-tany manontolo eo ambanin'ny tafo iray.